Par Taratra sur 23/10/2020
Big Mj – Jaos’Pub
Mpihira manana ny maha izy azy eo amin’ny tontolon’ny vazo malagasy i Big MJ, indrindra ny mozika mafana. Hitondra ny “Manala vita bacc” ao amin’ny Jaos’Pub Ambohipo ny lehilahy, anio zoma hariva 23 oktobra. Lohahevitry ny seho ny “Nuit blanche”.
Bigy Bandy – Piment Café
Hitondra ny “Kalaza Night” etsy amin’ny Piment Café ny Bigy Bandy, rahampitso asabotsy 24 oktobra 2020, manomboka amin’ny 5 ora hariva. Fiaraha-miasa amin’ny Ray Event Creators-Rec izy ity. Hovazoina ao avokoa ireo hira avy eto an-toerana sy ny vahiny manana ny hanitra ho azy eo amin’ny tontolon’ny mozika. Mpanao mozika efatra manana ny maha izy azy izy ireo.
Arohim – Lapa RN7 Soanierana
“Mozik’hehy” ny hoentin-dry Arohim etsy amin’ny Lapa RN7 Soanierana, rahampitso 24 oktobra manomboka amin’ny 4 ora hariva. Seho miresaka “pour” ou “contre” ny lohahevitra amin’izany. Fantatra fa natao ho an’ny olona mihoatra ny 18 taona no ho miakatra izy ity. Anisan’ny hanafana izany i Faniry Fitiavana, ankoatra ny “animation DJ”.
Atounah – Facebook sy You Tube
Mivoaka, anio zoma 23 oktobra 2020, ny rindrantsary “clip” “Mahaiza mifoha” an’i Atounah, mivoy ny gadona Rap. Hira miresaka ny tontolo manodidina sy ny fiarahamonina izany. Efa niangaliana fatratra ny pitsompitsony rehefa mialoha ny namoahana azy io, ary efa azon’ny rehetra ankafizina amin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera “facebook” sy “you tube” izany.
Valiha Académie – Hiditra amin’ny dingana lalindalina kokoa
Tontosa ny fampitam-pahalalana ho an’ireo hampianatra momba ny valiha sy ny tontolony, eo anivon’ny foibe fikarohana sy fampianarana Valiha Académie. Efa nirosohan’ireto mpianatra ho mpampianatra ireto ihany koa ny fizarana asa. Manomboka rahampitso, hiditra amin’ny dingan’ny fanehoana ny fikarohany manokana eo anatrehan’ny mpianatra izy ireo. Ankoatra ny asa niombonana, nomena safidy malalaka ireto mpiofana ho mpampianatra ireto ny amin’ny lohahevitry ny fikarohana nataony.
Nangonin’i Narilala sy HaRy Razafindrakoto